Daalo Air, Salaam Air, Freedom Air & Premier Air ayaa kala saxiixday heshiis kor loogu qaadayo qiimaha lagu raaco duulimaadyada aada Muqdisho iyo Nairobi, sida ku cad heshiis is afgarad ah oo ay kala saxiixdeen wakiillada shirkadahaasi 1-Jan-2021. Warbaahinta Axadle waxay muujineysaa in qiimaha tikidhada ee Muqdisho-Nairobi ay ku dhowdahay ama laba jibaareyso qiimihii hore.
$ 140 (Boqol iyo Afartan Doolar) qiimaha tikidhada ee Muqdisho-Nairobi kahor heshiiskii afarta shirkadood iyo Nairobi-Muqdisho wuxuu ahaa $ 150 (Boqol & konton doollar) laakiin marka loo eego shirkadaha duulimaadyada qiimaha tikidhada Muqdisho-Nairobi waxay noqon doontaa $ 260. (Laba Boqol & Lixdan Doolar) Dadka waaweyn halka caruurtu raaci doonaan $ 230 (Laba Boqol & Soddon Dollar).
Wakiilo ka socda shirkadahan ayaa booqday garoomada diyaaradaha ee magaalooyinka Kismaayo, Garowe iyo Baydhabo si ay wada hadalo ula yeeshaan Wasiirada Gaadiidka iyo Duulista Hawada ee dowlad goboleedyada KGS, Jubbaland iyo Puntland iyo sidoo kale wakiilo ka socda Daalo Air, Salaam Air, Freedom Air. & Premier Air inay kala hadasho tan Wakiilada Hay’ada Duulista Rayidka iyo Maamulayaasha garoomadan si looga dhaadhiciyo inay aqbalaan qiimaha cusub ee la kordhiyay.
Shirkadaha ayaa sidoo kale isku raacay in la kordhiyo qiimaha tikidhada duulimaadyada gudaha iyagoo go’aansaday in la joojiyo tartanka dhanka qiimaha iyo adeega, sidaas darteed waxay ku heshiiyeen kaliya hal diyaarad in ay tagto inta lagu jiro maalintii halkii aad ka heli lahayd laba ama saddex duulimaad maalintii.
Sida uu Axadle u sheegay sarkaal sare oo ka tirsan hay’adda duulista hawada Soomaaliya Jetways, Baaf, iyo Dhagax Silver Shirkada diyaaradaha ee fadhigeedu yahay dalka Kenya oo kamid ah shirkadaha ugu waaweyn ee bixiya amaahda shirkadaha diyaaradaha ee Soomaaliya ayaan ilaa iyo hada wax qiimo ah ku kordhin shirkadaha diyaaradaha shirkadaha Soomaalida laakiin shirkadaha Daalo Air, Salaam Air, Freedom Air & Premier Air ayaa go’aansaday inay yareeyaan qiimaha tikidhada. si macaash badan loo helo, xubno ka tirsan Hay’adda Duulista Hawada ayaa Axadle u sheegay.
Wasaaradda Gaadiidka & Duulista Hawada, Maareeyaha garoonka diyaaradaha Muqdisho iyo Maamulka Duulista Hawada ayaan weli ka hadlin heshiiska lagu kordhiyay qiimaha tikidhada diyaaradaha iyo sida shirkaduhu u abuurayaan jawi keli ah oo khatar ku ah ganacsiga duulista dalka. .
Jetways, Paf, & Stone Silver